Asihlola a imibhalo Umuntu angase amehlo, kodwa enzima. Nakuba kungase kungenzeka beka ukubambisana engozini, inikeza shazi phakathi yokuphila ngamunye ukuthi kungenziwa uzama ukufihla. Asihlola embhalweni wabo imiyalezo kungase kube indlela ngawe ukuthola okwengeziwe ngalokho abakwenzayo lapho Youre cha ezungeze uma unesizathu ababathembi othile ekuphileni kwakho.
exactspy ngoba lokhu manje omunye ngaphezulu kahle wayethanda spyware abathungathi emakethe. Nje njengoba kwaziwa yize akusho ukuthi kuwufanele kakhulu dollar. Abantu abaningi benza utshalomali bese sorry esikhathini esizayo.
Free sms Tracker ngaphandle target phone
– Emuva kuze ku CSV / HTML / PDF emibhalo spy nengxoxo
SMS Tracker For Android Phones Free no exactspy sinezici eziningana:
– Ingamela ukuma Global system spot. Thola futhi ubheke umsebenzi we umakhalekhukhwini! Realtime GPS navigation kokulandela, nge ishadi kokuhlupheka-free ukuqondisa umzila
– Thola athintane Recordings. Sizokwazi ukunaka izingxoxo eyenziwe mgomo ocingweni.(Google android And iOS omakhalekhukhwini)
– Izingodo call. Abaqaphi kanye izingodo abize futhi ubiza amarekhodi.
– Cell olungenayo ucingo imincele. Nciphisa noma iyiphi inombolo for engenayo izingcingo.
– Hamba nge SMS. Unake BONKE imiyalezo sms eyatholakala noma anikeze ovela umakhalekhukhwini. Spy ngemibhalo nge exactspy
– Keylogger. exactspy isici keylogging ngeke akuvumele ufunda konke little goal kwamakhasimende wakho ushaya idivayisi yeselula.
– Cpanel. Lula zonke izingodo kanye nefoni ulwazi internet kunini kusuka kunoma iyiphi Laptop noma kwikhompyutha
– Unokwethenjelwa. 10-Usuku yimali-back isiqinisekiso
– Gcina ithrekhi schedule. Unake yonke imisebenzi ekhalendeni, Imihlangano elungiselelwe memos.
– Funda ngokusebenzisa imiyalezo imeyili. Uyabuka imiyalezo imeyili eziphumayo nezingenayo
– Hlola ukusetshenziswa Web: history ukuhlola, web site amabhukumaka, ikhubaza internet sites
– Ulwazi nciphisa ngokushesha: Skype spy, Whatsapp spy and Fb spy, Viber spy and iMessage spy
– Bugging. Wena uzokwazi emlandweni okuzungezile nge exactspy
– Isilawuli Remote. Uzothola a control ophathwa ngesandla esikude yonkana ucingo nge agibele amahhashi exactspy: la izinhlobo imisebenzi njengoba yegajethi Wipeout, kude Igajethi okuvimbele okungenzeka ibe ngaphansi kubaphathi bakho
– Alibonakali! Ukusetshenziswa battery Minor
– Stealth! Ngeke asebenzise Text umyalezo imiyalo ukuthi ongabonisa efonini inhloso, eqinisekisa ekusithekeni of siqu sakho ukugcina ithrekhi
– Esiwusizo! Isekela ezinkulu amagama brand umakhalekhukhwini kanye os: Hambayo Ucingo Android, iPhone mobile amafoni
Free sms tracker app for android, Free sms tracker for any phone, Free sms tracker without installing on target phone, Free sms Tracker ngaphandle target phone, SMS Tracker For Android Phones Free
← exactspy – Izinhlelo inhloli imiyalezo iPhone Khulula ?